हामीले जस्तो रोप्छौ त्यस्तै फल पाउछौं
अक्टोबर 25, 2018 अक्टोबर 30, 2018 साइन्स इन्फोटेक	3 Comments जीवन, डा. राम बहादुर बोहरा
पारिवारिक जीवनमा अनेकौं यस्ता घटना देख्न र सुन्न पाइन्छ । हामीले सन्तानको विउ रोप्छौं त्यो सन्तान ठिक हुन सक्छ या हुदैन भन्ने हामीले सोचेका हुदैनौं । म विश्व हिन्दू महासंघको क्षेत्रीय इकाई समितिको अध्यक्ष हुँदा म केही बृद्धआश्रम घुमेको थिए त्यहाँ जे देखे त्यो देखेर मलाई एउटा सत्य घटना याद आयो । एउटा परिवारमा छोराको विवाहको लागि तयारी भएर कन्याको घरतर्फ लाग्यो र विवाह गरेर कन्या ल्याएर जन्ती घर फिर्ता भयो ।
साझ सवै काम सकेर दुलहा जब दुलहीको कोठामा पुग्दा रात धेरै भएकाले दुलहाले दुलहीसंग बसेर खाना खाने आग्रह गर्दा दुलहीले आमा थाक्नु भएको छ र वहा भोकै हुनुहुन्छ होला जानुस बोलाएर ल्याउनुस संगै बसेर खाउला भन्दा आमा सुतिसक्नु भएको होला हामीले खाना खाउ भनेपछी श्रीमतिले नमानेको र पटक-पटक बोलाउनुस भन्दा अटेर गरेकाले भोलिपल्ट दुलहालाई डिबोर्स गरिछन् र अर्कोसंग विवाह गरिछन् र ति दुलहाले पनि अर्कैसंग विवाह गरेछन् ।
समय बित्दै गएकाले बुढेसकालमा छोरालाई भनिछन् बाबु म केही मन्दिरको दर्शन र तिर्थ गर्न जान्छु भनेकाले छोराहरूले बोकेर तिर्थस्थलतर्फ लगेछन् । जाँदा-जाँदा बाटोमा खाना खानुपर्यो भनेर खाना खान लागेछन् त्यही एउटा बृद्धबुढोले टुलटुल हेरेको देखेर ति बृद्ध महिलालाई दया पलाएर आएछ छोराहरूलाई भनिछन् बाबु त्यो बुढालाई नुहाई यो खाना खुवाउ भनेपछि छोराहरूले अनुशरण गरेछन् र नुहाई कपडा लगाई आमाको नजिक ल्याउदा त जसलाई आमालाई खान बोलाउनुस भन्दा नबोलाउने पुर्ब दुलाह रहेछन् ।
किन यस्तो हाल भएको भन्दा छोराछोरीहरुले खाना खान नदिएकाले यस्तो भएको भनेर राम कहनी सुनाएछ । हो यदि तपाईंले मैले भनेको मानेको भए यो अवस्थामा हजुर पुग्नु हुने थिएन हामीले जस्तो विउ रोप्छौ त्यस्तै फल दिनेछ भनेपछी गल्ती महसुस भएछ । ठिक यो कहानी अहिले बृद्धआश्रममा डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, नेताका आमाबुबाको मुखबाट सुनेका थियौँ ।
आज बृद्धआश्रम छोड्नेका सन्तानले के आफ्ना बाबुआमालाई यसो नगर्लान । तर मानिसलाई पैसाले अन्धो बनाएको छ के राम्रो के नराम्रो हेक्का छैन । अग्रजहरूलाई सम्मान गर्ने परम्परा नेपालमा छैन । सिट पाएमा आफुलाई राजा सम्झनेहरूले समय चिन्न सकेका छैनन् भन्ने उधाहरण ती बृद्धहरूको मुखबाट सुन्न सकिन्छ ।
← नेपालमा बलात्कार किन बढ्दैछ ?
नेपालमा लोकतन्त्र उपहासको संकेत →
डिसेम्बर 21, 2018 साइन्स इन्फोटेक 0
तुलसी र यसको प्रयोग
अक्टोबर 27, 2018 नोभेम्बर 19, 2018 साइन्स इन्फोटेक 4
3 thoughts on “हामीले जस्तो रोप्छौ त्यस्तै फल पाउछौं”
Pingback:किस्मतमा जे लेखेको छ यही पाइन्छ - देखेको पाइदैन लेखेको पाइन्छ
Pingback:के तपाईलाई थाहा छ, यी ३ कुरा भएका पुरुषहरु सधै दु:खी र अभागी
Pingback:चाणक्य नीति अनुसार यी ३ कुराहरु भएका पुरुष अभागी हुन्छन